Dhaqdhaqaaq Ciidan oo ka socda Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Dhaqdhaqaaq Ciidan oo ka socda Muqdisho
Xaalad cakiran ayaa ka taagan Caasimadda Soomaaliya, taasoo ka dhalatay muddo-korarsiga Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dhaqdhaqaaq Ciidan ayaa laga dareemayaa magaaladda Muqdisho, iyadoo dowladda ay askar badan soo dhoobtay wadooyinka qaar kadib markii Xalay Saadaq Joon uu kasoo baxay Garoonka diyaaradaha.
Ciidamo Boolis ah, gaar ahaan kuwa Turkiga uu tababarey ee loo yaqaano Haramcad ayaa lagu arkay Isgoysyada Baar-Ubax, Taleex, Albaraka iyo Jidka-Sodonka, iyagoo wata gaadiidka gaashaaman.
Arintan ayaa timid kadib markii taliyihii Booliska gobolka Banaadir Saadaq Joon oo kasoo guurey nawaaxiga Afisyooni uu xalay fariisin cusub ka sameystay Shiirkole, isagaa ay la socdaan ku dhawaad 100 askari iyo 10 gaari oo kuwa dagaalka ah.
Ujeedka uu Saadaq Joon u degay Shiirkole waxaa laugu tilmaamay inuu usoo dhawaaday Beeshiisa oo Xaafadda u badan, taasoo uu ka doonayo inay difaacdo hadii dowladda duulaan kusoo qaado.
Saadaq Joon ayaa xilka laga qaadey Isniintii kadib markii uu isku dayay inuu baajiyo Kulan Gollaha Shacabka yeelanayay, oo Muddo-kordhin labo sano loogu sameeyay Farmaajo iyo Baarlamaanka.
Taliyihii hore ee Booliska gobolka Banaadir wuxuu si dhaw ula soo shaqeeyay Khayre, waxaana lagu eedeeyay inuu hogaamiyay weerarkii lagu qaadey Guriga C/raxmaan C/shakuur Warsame December 2017.
Farmaajo ayaa sidoo kale ka xayuubiyay Saadaq Joon darajadii Ciidan ee uu lahaa, waana tallaabo ku caan-baxday Nabad iyo Nolol mudadii afarta sano ee lasoo dhaafay, iyadoo Villa Somalia ku fashilintay hirgelinta doorashooyinka dalka.